Chekwaa ihe ruru 20% mgbe ịzụrụ ngwaahịa Apple: Mac, iPhone, ... | Esi m mac
Chekwaa ihe ruru 20% na nzụta ngwa ahịa Apple, onyinye ahụ bidoro
Izu a bụ oge nke abụọ na ụlọ ahịa a na-abịa n'ihu na weebụsaịtị anyị, nke, dị ka ọ na-ekwu na Wikipedia, pụtara: Fédération Nationale d'Achats des Cadres; n'asụsụ Spanish: 'National Federation of Executive Purchasing. Ọ bụ ụlọ ahịa ọkachamara na ire ere ihe elektrọnik nke anyị maraworị ndị niile ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ niile taa.
Ọfọn, ọ dị ka ị na-erite uru nke ndọ a Black Friday nwere, ha na-ebupụta nkwalite na-atọ ụtọ maka ndị niile chọrọ ịzụta Mac, Apple Watch, iPhone ma ọ bụ ọbụna iPad na ego.
N'oge ngwụcha izu a, anyị ga-ahụ ụfọdụ onyinye na-atọ ụtọ ma anyị ga-ahapụ gị ụfọdụ n'ime ha ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụrụ ngwaọrụ Apple nke ga-adị ọnụ ala karịa. N'ihe banyere Mac (nke bụ ihe anyị nwere mmasị na ya) anyị nwere ike ịhụ un ego ruru 15% + 5% mbelata ego maka ndị otu na ụfọdụ Macs dị ka nke ọhụrụ 21,5 GHz 1,6-anụ ọhịa iMac maka 1.112,73 euro ma ọ bụ jiri 13% ego maka ndị na-abụghị ndị otu.
N'ihe banyere iPhone anyị nwere ike ịchọta onyinye dị ka nke na-adọrọ mmasị iPhone 6S 64 GB ntụ ntụ ntụ maka ihe dị ka euro 644.
Apple ese ha nwere mbelata 7% na ụlọ ahịa, yabụ anyị nwere ike ịzụta aluminom Apple Watch S1 42mm na eriri ọla edo na egwuregwu maka euro 344. Na iPads kwa anyị chọtara ezigbo ego dịka ọmụmaatụ iPad Pro nke 9,7 sentimita asatọ na 32GB nke ikike maka euro 590,73.
Na nkenke, ọ bụ maka ezigbo ọnụahịa maka ngwaahịa ndị na-anaghị belata ọnụahịa ha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe ọ bụla. Kedu ihe ọzọ Fnac ka mepere ụlọ ahịa ọhụrụ na ụlọ ahịa ahịa Espai Gironès n'obodo Girona, ebe ị nwere ike ịhụ ma metụ ngwaahịa Apple ọhụụ ọhụụ yana ịnwe ike ịnweta kaadị ndị otu iji nweta ego ndị a na ntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Chekwaa ihe ruru 20% na nzụta ngwa ahịa Apple, onyinye ahụ bidoro
Ihe onyonyo vidiyo izizi nke akwụkwọ "Ezubere Apple na California"
SIP na ụfọdụ MacBook Pros na Touch Bar nwere nkwarụ na ndabara